Qalabka Parabolan (Tren Hex) (23454-33-3) hplc = 98% | AASraw Trenbolone
Parabolan (Tren Hex) budada
/ Products / Qaar kale waxay / Parabolan (Tren Hex) budada
SKU: 23454-33-3. Category: Qaar kale waxay
AASraw waxay ku jirtaa kartida iyo awooda wax soo saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga ee budada Parabolan (Tren Hex) (23454-33-3), iyadoo la raacayo Xeerarka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Parabolan (Tren Hex) budada waxay matalaysaa qeybta wayn ee saldhigga ah ee saldhigga ah ee Trenbolone oo ku yaala suuqa, iyada oo la adeegsanayo magaca ganacsiga Parabolan. Parabolan waxaa loo soo qoray sanado badan oo ah xaalado nafaqo-xumo, taas oo ka dhigaysa mid macno badan marka aan ku dhexjirno xarunta. Waxaa sidoo kale loo qoray si loo daweeyo lafaha osteoporosis xaaladaha qaarkood, iyo sidoo kale daaweynta cachexia.
Parabolan (Tren Hex) video budada ah
Parabolan (Tren Hex) Calaamadaha asaasiga ah
Name: Parabolan (Tren Hex) budada
Miisaankani waa: 312.4028
Dhibcaha Biyaha: 90-92 ° C
Parabolan (Tren Hex) isticmaalka budada ee wareegga steroid
Trenbolone Tren Hex sida caadiga ah waxaa loogu yeeraa budada Parabolan (CAS 23454-33-3).
Isticmaalka budada Parabolan
"400mg / toddobaadkii of compound compound", ama "500mg / toddobaadkii".
Digniin ku saabsan budada Trenbolone Parabolan
Steroidkani wuxuu qaadi doonaa waxyaabo badan oo suurtogal ah in uu yeesho steroid waxyeelo badan. Si kastaba ha ahaatee, waxay sidoo kale qaadi doontaa dhowr ah inkastoo ay suurtagal tahay in ay noqdaan kuwo u gaar ah hormoonka Trenbolone. Dhibaatooyinkaasi waxay aad ugu tiirsan yihiin jawaabta. Qaadashada ayaa door ka ciyaari karta laakiin jawaabtu waa tan ugu muhiimsan. Sababtoo ah saameyntan waxaa lagu sheegi doonaa si xoog leh dad badan ayaa bilaabay inay si qalad ah u yiraahdaan in Trenbolone ayan wanaagsaneyn haddii dhibaatooyinkani aysan dhicin. Tani waa habka madadaalo ee fikirka. Qaar kale waxay qabaan steroid aan loo isticmaalin ilaa aad haysato sannado badan oo ah waayo-aragnimo steroid ah.
Parabolan ayaa gacanta ku haysa mid ka mid ah steroids ugu weyn ee waqti kasta. Mid ka mid ah steroids oo kaliya oo laga yaabo inay ka sarreyso waxay noqon kartaa Trenbolone Acetate. Inkastoo ay labaduba ka kooban yihiin hoormoonka Trenbolone, had iyo jeer way fududahay in la joogteeyo heerarka dhiigga ee sarreeya iyo heerarka dhiigga ee hoormoonka leh ee Acetate version. Labadaba, waxaad leedahay steroid anabolic fantastic ah. Ma aha oo kaliya waa awood, dabeecaddiisa oo si fudud u kala saartaa habka ugu badan ee steroids anabolic midna ma riyoon karo.
Suuq-geynta Sheyga Parabolan
Sida loo soo iibsado budada Parabolan (CAS 23454-33-3): iibso budada Tren Hex oo ka sameysan AASraw
AASraw provideds khayroon daahirnimo 98% Parabolan (hexahydrobenzylcarbonate trenbolone) budada ceeriin in bodybuilders ama shaybaaro dhulka hoostiisa isticmaalka cirbad si ay faa'iido badan in tababarka.